လှေခါးပေါ်က ပစ်ချတာတောင် ဘာမှ မဖြစ်တဲ့ Redmi Y3 | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone လှေခါးပေါ်က ပစ်ချတာတောင် ဘာမှ မဖြစ်တဲ့ Redmi Y3
လှေခါးပေါ်က ပစ်ချတာတောင် ဘာမှ မဖြစ်တဲ့ Redmi Y3
Redmi ဟာ တန်ဖိုးနည်း စမတ်ဖုန်းများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ ရှောင်မီရဲ့ ဘရန်းခွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက ဆဲလ်ဖီး အသားပေး Y3 ကို မကြာခင်မှာ ကြေညာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ၂၄ ရက်မှာ မြင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ Teaser များကိုလည်း ကုမ္ပဏီက မျှဝေနေပါတယ်။ Redmi India က Redmi Y3 မှာ 4000mAh Battery ပါမယ်ဆိုတာကို ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ တွစ်တာမှာ မကြာခင်က အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ Redmi Y2 ရဲ့ 3080mAh Battery ထက် ပိုကြီးမားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း သူ့ကို လှေခါးပေါ်က ပစ်ချတဲ့ ဗီဒီယိုကို Redmi India က တွစ်တာမှာ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ Y3 ဟာ အကြမ်းခံပြီး လှေခါးပေါ်က ပစ်ချတာတောင် ဘာမှ မဖြစ်တာ မြင်ရပါတယ်။ အနောက်ဘက်ဟာ Gradient Design ဖြစ်ပြီး အကွက်အပြောက်များ ပါရှိပါတယ်။ အနောက်ကင်မရာ ၂ လုံးနဲ့ လက်ဗွေရာ အာရုံခံ ကိရိယာ ပါပါတယ်။ မျက်နှာပြင်မှာ Notch ပါပြီး ဘေးဘောင်များက ပါးလွှာပါတယ်။
There. Dropped it down the stairs. Will you drop your phone like that? #32MPSuperSelfie coming on 24-04-2019 pic.twitter.com/b998mk8JRS— Redmi India (@RedmiIndia) April 20, 2019
Redmi က အဲဒီ စမတ်ဖုန်းမှာ 32MP Selfie Camera နဲ့ Waterdrop Notch Display ပါမယ်လို့ အတည်ပြုထားပြီးပါပြီ။ သူဟာ ဆဲလ်ဖီး အသားပေး စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ သူ့ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို ဒီလောက်သာ သိရပါသေးတယ်။ လာမယ့် ရက်ပိုင်းထဲမှာ သူ့ကို တရားဝင် ကြေညာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လှခေါးပျေါက ပဈခတြာတောငျ ဘာမှ မဖွဈတဲ့ Redmi Y3
Redmi ဟာ တနျဖိုးနညျး စမတျဖုနျးမြား ထုတျလုပျရောငျးခတြဲ့ ရှောငျမီရဲ့ ဘရနျးခှဲတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ကုမ်ပဏီက ဆဲလျဖီး အသားပေး Y3 ကို မကွာခငျမှာ ကွညောတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ လာမယျ့ ၂၄ ရကျမှာ မွငျရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့ Teaser မြားကိုလညျး ကုမ်ပဏီက မြှဝနေပေါတယျ။ Redmi India က Redmi Y3 မှာ 4000mAh Battery ပါမယျဆိုတာကို ဗီဒီယိုတဈခုနဲ့ တှဈတာမှာ မကွာခငျက အသိပေးလိုကျပါတယျ။ Redmi Y2 ရဲ့ 3080mAh Battery ထကျ ပိုကွီးမားလာတာ ဖွဈပါတယျ။
အခုလညျး သူ့ကို လှခေါးပျေါက ပဈခတြဲ့ ဗီဒီယိုကို Redmi India က တှဈတာမှာ မြှဝလေိုကျပါတယျ။ Y3 ဟာ အကွမျးခံပွီး လှခေါးပျေါက ပဈခတြာတောငျ ဘာမှ မဖွဈတာ မွငျရပါတယျ။ အနောကျဘကျဟာ Gradient Design ဖွဈပွီး အကှကျအပွောကျမြား ပါရှိပါတယျ။ အနောကျကငျမရာ ၂ လုံးနဲ့ လကျဗှရော အာရုံခံ ကိရိယာ ပါပါတယျ။ မကျြနှာပွငျမှာ Notch ပါပွီး ဘေးဘောငျမြားက ပါးလှာပါတယျ။
Redmi က အဲဒီ စမတျဖုနျးမှာ 32MP Selfie Camera နဲ့ Waterdrop Notch Display ပါမယျလို့ အတညျပွုထားပွီးပါပွီ။ သူဟာ ဆဲလျဖီး အသားပေး စမတျဖုနျး ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာ သူ့ရဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ဒီလောကျသာ သိရပါသေးတယျ။ လာမယျ့ ရကျပိုငျးထဲမှာ သူ့ကို တရားဝငျ ကွညောတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleဓါးနဲ့ ခြစ်တာတောင် ခြစ်ရာ သိပ်မထင်တဲ့ Huawei P30 Pro
Next articleTotal like ဘယ်လောက်ရသလဲဆိုတာ မမြင်ရအောင် ဖျောက်ပေးနိုင်မယ့် feature စမ်းနေတဲ့ တွစ်တာ